Pamwe Nguva yekufunga zvakare zano rako Kana ... | Martech Zone
Pamwe Nguva Yekufungisisa yako Strategic Kana…
Chishanu, May 30, 2008 Svondo, Gunyana 30, 2012 Douglas Karr
Kana iwe uchizomboenda kumhinduro yako yekugona kuwedzera kutengesa - pamwe iyi haisi iyo nzira. Ini ndakatumira saiti kushamwari yangu Jason, uye akawana iyi diki kesi kesi kudzidza pa maresitorendi akasunda sei yavo 1/2 mutengo wakasarudzika uye zvishoma zvakapetwa kaviri kutengesa kwavo.
Akawanda Sei Blog Zvinyorwa?
Wildcard DNS uye Dynamic Subdomains
Jun 1, 2008 pa2: 59AM
Mubvunzo ndewokuti, vakawedzera kaviri kutengesa kwavo mukati zvidzidzo kana in madhora? Ndingadai ndisingadi kuti poo-poo wekupedzisira…
Jun 1, 2008 pa9: 53AM
Pasina kupokana paive nemimwe mhedzisiro ipapo yekuti mutengi akafara zvakakwana nekubatsira kunyora bepa chena pairi. Ingori sarudzo isinganzwisisike yekuisa se 'Bhizinesi Mhedzisiro'.
Kufungidzira kwangu ndekwekuti vaive ne1 / 2 mutengo wekutengesa pa vamwe zvigadzirwa, pamwe zvinokufadza, uyezve vakawedzera zvakapetwa kutengesa kwavo kwevatengi pane entrees.
Jun 1, 2008 pa8: 42AM
Nei kumira pa1 / 2 mutengo? Ivo vanogona kuisa izvo zvinhu pa1 / 4 mutengo uye zvakapetwa zvakapetwa kutengesa kwavo!
Jun 1, 2008 pa9: 54AM
Ndizvo zvandaifunga! 🙂
Jun 2, 2008 pa8: 39AM
Izvo zvinondiyeuchidza nezvenyaya - ini handizive kana chiri chechokwadi kana kwete - nezvemurume akapeta zvakapetwa nekutengesa mushonga wemazino nekuwedzera saizi yegomba mutabhu.